La Peregrina Pearl: အသည်းစွဲဇာတ်လမ်း - မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်
စက်တင်ဘာလ 30, 2014
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၅၀ ကျော်ကတည်းကစတင်ခဲ့သောဤခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်အလယ်ခေတ်ကမှ စ၍ တော်ဝင်အိမ်ထောင်စုများနှင့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောသွေးဆာနေသောမိဖုရားများကဟောလိဝုဒ်၏တောက်ပကြယ်ပွင့်ဖြစ်သောအဲလစ်ဇဘက်တေလာအထိလိုက်နာရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ဒီကျော်ကြားသမိုင်း ပုလဲ ဟုခေါ်သည် la Peregrina အကြောင်းပြချက်တစ်ခု။ စပိန်ဘာသာပြန်ခြင်းသည်“ Pilgrim” သို့မဟုတ်“ Wanderer” ကိုဆိုလိုသည်။
အဆိုပါ ပုလဲ ၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ပနားမားပင်လယ်ကွေ့ရှိစန်တာမာရဂရီတာကျွန်း၏ကမ်းခြေရှိအာဖရိကန်ကျေးကျွန်တစ် ဦး ကန ဦး တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကစပိန်လူမျိုးများသည်ပင်လယ်အောက်ခြေရှိကမာများမှပုလဲရိတ်သိမ်းရန်လူများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးအသက်ရှုခြင်းအားဖြင့်။ ထို့ကြောင့်ငုံးငှက်အရွယ်အစားဖြစ်သောပုလဲကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကတွေ့ရှိခဲ့သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်သူ၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အတူဆုခခြံခဲ့သည်။
La Peregrina ကိုပနားမားရှိစပိန်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Don Pedro de Temez အားအစကပေးခဲ့သည်။ The ပုလဲ ထို့နောက်ဘုရင်ဖာဒီနန် (၁၄၇၉-၁၅၁၆) နှင့်သူ၏ဆက်ခံသူဘုရင်ချားလ်စ် (၁၅၁၆-၁၅၆၆) အုပ်ချုပ်စဉ်စပိန်သရဖူရတနာများကို ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
La Peregrina သည်စပိန်တို့၏ရန်သူဖြစ်သောအင်္ဂလန်သို့သွားစဉ်တော်ဝင်မိသားစုများကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်ကစပိန်ဘုရင်ဖိလစ် II (၁၅၂၇-၁၅၉၈) မှအင်္ဂလန်နိုင်ငံမေရီ ၁ တွင်“ Mary Tudor” သို့မဟုတ်“ Bloody Mary” ဟုလည်းခေါ်ဝေါ်ရန်တင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
စပိန်ဘုရင်ဖိလစ် ၂ နှင့်အင်္ဂလန်မှမေရီ ၁ တို့သည်ပုလဲကိုဝတ်ဆင်ကြသည်
ထိုပုလဲကို ၁၅၅၄ ခုနှစ်တွင်သူမလက်ထပ်မည့်အချိန်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာလက္ခဏာအဖြစ်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုရင်မမေရီ၏ပုံတူပန်းချီကားများမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။
သွေးထွက်သံယိုမာရိသည် 1554 ခုနှစ်တွင်ပုလဲဝတ်ဆင်
ဘုရင်မမေရီသည်ဘုရင်ဟင်နရီ (၈) နှင့်အာရဂုန်ဘုရင်မကက်သရင်းတို့၏သမီးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၅၅၃ မှ ၁၅၅၈ ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလန်ဘုရင်မမာရိအဖြစ်နန်းစံခဲ့သည်။
၁၅၅၃ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဖိလစ်၏ပုံတူပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုတွေ့ခဲ့ချိန်တွင်မေရီသည်အသက် ၃၇ နှစ်သာရှိသေးပြီးသူ့အားချစ်မြတ်နိုးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
လက်ထပ်ပြီးလေးနှစ်အကြာ ၁၅၅၈ ခုနှစ်တွင်ဖိလိပ္ပုနှင့်မာရိတို့သည်တော်ဝင်မိသားစုရှိကြသည်။ သူမက Peregrina ပုလဲဝတ်ဆင်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ကံမကောင်းစွာမာရိအတွက်ဖိလိပ္ပုသည်သူမနှင့်မတူပါ။ သို့သော်ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်၊ ၁၅၅၄ တွင် Winchester ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌သူတို့၏လက်ထပ်ခြင်းသည်ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
မေလ ၁၅၅၈ တွင်မကြာခဏဖျားနာခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ နောက်ဆုံးတွင်ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၅၅၈၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သောစိန့်ဂျိမ်းစ်နန်းတော်တွင်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဘရပ်ဆဲလ်တွင်ရောက်ရှိနေသောဖိလစ်သည်သူမ“ သူမသေဆုံးခြင်းအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာနောင်တရမိသည်” ဟုစာဖြင့်ရေးသားခဲ့သည်။ မာရိသေဆုံးပြီးနောက်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသောဖိလိပ္ပုကသူ့အစ်မအဲလစ်ဇဘက်အားအကြံပေးခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အဲလစ်ဇဘက်ကငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
ဘုရင်မမေရီကွယ်လွန်ပြီး ၁၅၅၈ ခုနှစ်မှာပုလဲကိုစပိန်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာနှစ်ပေါင်း ၂၅၀ ကျော်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးစပိန်ဘုရင်မတွေရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအကြိုက်ဆုံး။ ၁၆၀၅ ခုနှစ်တွင်သြစတြီးယားမှမာဂရက်၊ စပိန်ဘုရင်မနှင့်စပိန်နိုင်ငံမှဖိလစ် ၃ ၏ဇနီးတို့သည်စပိန်နှင့်အင်္ဂလန်တို့အကြားငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်အတွက်ပုလဲကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက်ဖိလစ် ၄ ၏ဇနီးနှစ် ဦး စလုံး ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ; ဘုရင်မ Isabel (Elizabeth လိရှဗက်) နှင့် Queen Mariana (Maria Anna) ။
ဘုရင်မ Isabel (အဲလစ်ဇဘက်)
ဖိလစ် ၄ မှပထမဆုံးဇနီးဖြစ်သူဘုရင်မအီစီဘယ်လ် (အဲလစ်ဇဘက်) ပုလဲ ၁၆၃၂ ခုနှစ်ကဒီမြင်းစီးသူရဲပုံတူတွင်ပုလဲ၏ကျိန်စာသည်ဝတ်ဆင်သူများ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝကိုဆက်လက်ပျက်ပြားစေခဲ့ပြီး Isabel နှင့်ဖိလစ်နှစ် ဦး စလုံးသည်ကိစ္စများရှိသည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ Isabel သည်သူမ၏လူကြီးလူကောင်းဖြစ်သောစောင့်ဆိုင်းနေသည့်ကဗျာဆရာ Peralta နှင့်ဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ Peralta သည်သူ၏ဘ ၀ တွင်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသတိပေးချက်ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ သူသေဆုံးခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ကိုဖိလစ် ၄ နှင့်အိုလီဗာရက်စ် (၀ န်ကြီးချုပ်နှင့်ဖိလစ်၏အကြိုက်ဆုံး) အကြားခွဲဝေပေးခဲ့သည်။
၁၆၄၄ ခုနှစ်တွင် Isabel သေဆုံးခြင်းတွင် ပုလဲ ဖိလိပ္ပု၏ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူသြစတြီးယားမှမာရီယာနာသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ မာရီယာနာသည်ဖိလစ်၏ ၁၄ နှစ်အရွယ်တူမဖြစ်သည့်အတွက်ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်တစ်ခါမှမပါဝင်ခဲ့ဖူးပါ။ လက်ထပ်ခြင်းသည်ကလေးငါးယောက်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၂ ဦး သာလူကြီးဘဝသို့ကူးပြောင်းခဲ့ပြီးမွေးဖွားခြင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများခံစားခဲ့ရသည်။
၁၆၉၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၆ ရက်တွင် Mariana သည်စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့ရှိ Uceda နန်းတော်တွင်ကွယ်လွန်သွားပြီးထိုအချိန်တွင်စပိန်နိုင်ငံ၏မြို့တော်သည်မှောင်မိုက်၌ဖုံးလွှမ်းနေသောလကြတ်ခြင်းလုံးဝဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပုလဲ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုခဲ့ကြသည်။ ကံဆိုးသောမာရီယာနာသေဆုံးခြင်းနှင့်အတူပုလဲနှင့်ပတ်သက်သောစာရွက်စာတမ်းများပျောက်ဆုံးသွားပြီး ၁၈၁၃ မတိုင်မီနှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အကြာတွင်ထိုပုလဲသည်သမိုင်းတွင်ပြန်ပေါ်လာသည်။
La Peregrina သည် Napoleon Bonaparte နှင့်သူ့အစ်ကို Joseph Bonaparte တို့၏ကျေးဇူးကြောင့်မြင်ကွင်းတွင်ပြန်ပေါ်လာသည်။
နပိုလီယံဘိုနာ ဂျိုးဇက်ဘိုနာပါတ ချားလ်စ်ဘိုနာပါတ
၁၈၀၈ ခုနှစ်တွင်နပိုလီယံသည်စပိန်ကိုကျူးကျော်ခဲ့သည်၊ စပိန်ကိုချေမှုန်းပြီးဂျိုးဇက်ဘိုနာပါ့တ်အားစပိန်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ ၁၈၁၃ တွင် Wellington ၏ Duke ၏ရှုံးနိမ့်မှုမတိုင်မီအထိဂျိုးဇက်သည်ငါးနှစ်ကြာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစပိန်မှထွက်ပြေးရမည်ဖြစ်သည်။ သူသည်စပိန်တော်ဝင်ရတနာအချို့နှင့် Peregrina Pearl တို့ကိုသူနှင့်အတူခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၁၈၁၅ ခုနှစ်တွင်နပိုလီယံဘိုနာပါတေး၏နောက်ဆုံးကျဆုံးခြင်းပြီးနောက်ဂျိုးဇက်ဘိုနာပါတသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှအမေရိကန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့သည်။ သူသည် ၁၈၄၄ ခုနှစ်တွင် Florence ၌ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးပုလဲကိုသူ့တူဖြစ်သူ Charles Louis Bonaparte သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ချားလ်စ်သည်မိမိကိုယ်ကိုပြင်သစ်ဘုရင်အဖြစ်တရားဝင်ခံယူသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသူ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင် Bonapartism ကိုနိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူသည်စွန့်စားမှုပုံစံဖြင့်နေထိုင်သည်။ ရဲတိုက်တစ်ခုကိုဝယ်သည်။ အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ပဲရစ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ သူသည်ပြင်သစ်သမ္မတဖြစ်လာရန်ပြင်ဆင်မှုများစတင်ခဲ့ပြီး ၁၈၄၈ တွင်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင်အခြားအာဏာသိမ်းမှုပြီးနောက်ပြင်သစ်၏theကရာဇ်နပိုလီယံ ၃ ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
၁၈၇၃ ခုနှစ်၊ လန်ဒန်၊ မေဖေးတွင်မွေးဖွားခဲ့သော Abercorn ၏ဒုတိယမြောက် Marquess Lord James Hamilton အား Peregrina ပုလဲကို ၁၈၇၃ ခုနှစ်တွင်မရောင်းခင် ၁၈၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်တွင်ပုလဲသည်၎င်း၏လည်ဆွဲလည်ပင်းကျိုးနေစဉ် အနည်းဆုံးနှစ်ခုအခါသမယ။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်သည်ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ရှိဘောလုံးပွဲအတွင်းဒုတိယမြောက် Windsor Castle ရှိဆိုဖာတွင်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးအခါသမယတွင်, ပုလဲပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ သူသည် Abercorn မိသားစုတွင်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်နေခဲ့ပြီး ၁၉၆၉ တွင် Sotheby's နှင့်လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည်။
ရစ်ချတ် Burton နှင့် Taylor လိရှဗက်တေလာ
Richard Burton သည် ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် Sotheby's လေလံတင်ပွဲ၌ဒေါ်လာ ၃၇၀၀၀ ဖြင့်ပုလဲများကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူသည်၎င်းဇနီးဖြစ်သူအဲလစ်ဇဘက်တေလာအားလက်ထပ်စဉ်က Valentine Day လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ Burton သည် La Peregrina ကို ၀ ယ်သောအခါနူးညံ့သိမ်မွေ့သောပုလဲလည်ဆွဲပေါ်ဆွဲကြိုးအဖြစ်ဆိုင်းငံ့လိုက်သည်။ Cartier မှဒီဇိုင်းဆွဲ။ လည်ဆွဲကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်မှာပုလဲ၏လက်ရာဖြစ်သည်။ ပတ္တမြား နှင့် စိန်ပွင့်.
အဲလစ်ဇဘက်တေလာသည်ပုလဲကိုမူလအနေအထားတွင် ၁၉၆၉ ရုပ်ရှင် Thrand Days of Anne တွင်ပြခဲ့သည်
ရစ်ချတ်ဘာတွန်ကလက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများကိုသမိုင်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာဖြင့် ၀ ယ်ခဲ့သည်ကိုလူသိများသည်။ ၎င်းသည် La Peregrina ၏ထင်မြင်ချက်သည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည် "ဒီဟာဝလေလ်လူမျိုးပိုင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့ပြန်ရောက်ပြီလို့ငါထင်ခဲ့တယ်"
အထက်ဖော်ပြပါ Mary ၏ပန်းချီကားတစ်ချပ်၏ဆွဲအားဖြင့် Elizabeth လိရှဗက်သည်လည်ဆွဲ၏ဒီဇိုင်းအသစ်ကိုသူမအားလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ Burton သည်ပုလဲ ၀ တ်ဆင်ထားသောဘုရင်မ Mary ၏နှစ် ၄၀၀ သက်တမ်းရှိပန်းချီကားကိုလေလံဆွဲရန်စဉ်းစားခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းအစား National Art Collections ရန်ပုံငွေကိုရရှိခဲ့သည်။ ပုလဲ၏ယခင် setting ကို ၁၉၆၉ ခုနှစ် came လိရှဗက်၏ cameo ကိုလူသိရှင်ကြားရိုက်ချက်များတွင်တွေ့နိုင်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင်၏အန်းနှင့်အသစ်သောပိုမိုပီပီ setting ကို သူ့အတွက်ကွာရှင်းပါ - ကွာရှင်းခြင်း နှင့် တစ် ဦး က Little ကညဂီတ.
la Peregrina ပုလဲ, Cartier setting ပုံဆွဲ။ အနီရောင်တွင်အဲလစ်ဇဘက်တေလာ၏မှတ်ချက်။
၂၀၁၁ မတ်လတွင်အဲလစ်ဇဘက်တေလာကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူမ၏လက်ဝတ်ရတနာများကိုကမ္ဘာလှည့်ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဒီပုလဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလက Christie's လေလံပွဲမှာစံချိန်တင်ဒေါ်လာ ၁၁.၈ သန်းနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်။ လေလံမတိုင်မီကပုလဲကိုဒေါ်လာ ၂ မှ ၃ သန်းအထိကြိုတင်ရောင်းချရန်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ မိနစ် ၄ မိနစ်မျှသာလေလံပြီးနောက်၊ ပုလဲသည်မျှော်လင့်ချက်အားလုံးထက်ကျော်လွန်သောစျေးဖြင့်ရောင်းချခဲ့သည်။ ၎င်းကိုအာရှမှပုဂ္ဂလိကဝယ်သူကဝယ်ယူခဲ့သည်။
source: www.gemselect.com ဖြစ်သည်
Tags:သွေးထွက်သံယို Mary • Cartier • ခရစ်စမတ် • Elizabeth Taylor • သမိုင်း • hollywood • la peregrina • နပိုလီယံ • ဆှဲကွိုး • ပုလဲ • ရေရှိဖို့
မှတ်ချက်0ခုLa Peregrina Pearl: စိတ်အားထက်သန်သောပုံပြင်"